5 cadow xiriirka | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/01/2022 22:46 | Xiriirka
Xiriirka lamaanaha, sida ku dhacda inta kale ee xiriirka ka dhexeeya dadka, waxay noqon kartaa xoogaa adag. Waxaa laga yaabaa inay dhacdo in wax walba ay si habsami leh u socdaan, isku xirnaantana ay sii xoogeysato maalinba maalinta ka dambeysa ama ay soo galaan cadowyo gaar ah oo si tartiib tartiib ah u sii xumaanaya xiriirka aan soo sheegnay.
Maqaalkan soo socda waxaynu kaga hadlaynaa sababaha ama sababaha caadiga ah ee uu xidhiidhku noqon karo khilaaf iyo in ay ku dambayn karaan.
1 Xiriir xumo
2 Ku tiirsanaanta shucuurta
3 Wax ka qabashada shucuurta
4 Kalsooni la’aan
Xidhiidhku ma maqnaan karo lamaanaha. maadaama ay tahay tiirka aasaasiga ah ee ay ku dhisan tahay. Qaybaha lamaanaha ah waa in ay muujiyaan waxa ay dareemayaan mar walba, haddii aysan taasi dhicin, waa wax iska caadi ah in dagaal iyo colaado ay bilaabaan waqti ka dib. Waxaa wanaagsan wanaaga labada lamaane inay si degan oo degan u fariistaan ​​una sheegaan waxaad dareemeyso.
Ku tiirsanaanta shucuurta
Mid kale oo ka mid ah cadawga lammaanaha ayaa ah ku-tiirsanaanta shucuureed. Ma noqon karto in farxadda qofka ay mar walba ku xiran tahay qof kale. Ku-tiirsanaanta shucuurtu waxay sababtaa xidhiidhka caafimaadka qaba ee lammaanaha inuu noqdo sun. Jacaylka lammaanuhu waa inuu ahaadaa mid xor ah oo aan lahayn nooc kasta oo xiriir ah.
Wax ka qabashada shucuurta
Wax-is-daba-marinta niyadeed waa mid kale oo ka mid ah cadawga weyn ee lammaanaha. Xaaladdan oo kale, mid ka mid ah dhinacyada xiriirka ayaa aqbala eedeymo isdaba-joog ah si lammaanuhu ugu dhowaado iyaga. Wax-is-daba-marintani waxay xidhiidh toos ah la leedahay ku-tiirsanaanta shucuureed ee kor lagu arkay. Looma dulqaadan karo xaalad kasta in mid ka mid ah labada dhinac ee lammaanaha ahi uu isticmaalo wax-is-daba-marin xagga shucuureed si ay u maamulaan qofka kale.
Kalsoonidu waa, oo ay weheliso xidhiidh wanaagsan, mid ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee lammaanaha. Kalsooni la'aanta qofka kale waxay sababtaa in xidhiidhku si tartiib tartiib ah u daciifo. Inta badan kiisaska, kalsooni la'aanta ayaa muuqata sababtoo ah beenta uu mid ka mid ah labada lamaane u isticmaalo si joogto ah.
Lammaane kasta, masayrka dabiiciga ah ayaa dhici kara oo aan khatar gelinayn xidhiidhka aan soo sheegnay. Dhibaatada ugu weyn ee iyaga ka mid ah waa in ay yihiin qasab iyo hinaaso cudur-sidaha. Masayrka noocaan ah wuxuu cadow weyn ku yahay xiriir kasta, wuxuuna sabab u yahay khilaaf iyo dagaal burburiya.
Gaaban, Qofna ma odhan in xidhiidhku ahaa wax fudud. Waa xidhiidh ka dhexeeya laba qof oo ay tahay in ay si joogto ah u safraan si ay u gaadhaan fayoobaan iyo farxad gaar ah. Waxa jira dhawr arrimood oo ay tahay in ay jiraan si aanu xidhiidhku u wiiqmin, sida ixtiraamka, kalsoonida, xidhiidhka ama jacaylka. Taas bedelkeeda, waxaa lagama maarmaan ah in laga hortago in cadawga qaarkood ay soo baxaan mar haddii ay dhalin karaan khilaafyo aan faa'iido u lahayn mustaqbalka wanaagsan ee lammaanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » 5 cadawga xidhiidhka